Maxay ka wada hadleen Muuse Biixi & Madaxweynaha Dowladd deegaanka Soomaali Itoobiya? | Dayniile.com
Home Warkii Maxay ka wada hadleen Muuse Biixi & Madaxweynaha Dowladd deegaanka Soomaali Itoobiya?
Maxay ka wada hadleen Muuse Biixi & Madaxweynaha Dowladd deegaanka Soomaali Itoobiya?
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Maanta qasriga madaxtooyada ee Magaalada Hargeysa waxaa uu ku qaabilay madaxweynaha dalwad-deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) oo safar ku jooga halkaas.
labada mas’uul ayaa waxaa ay ka wada hadleen arrimo ay kamid yihiin, Amniga, Dhaqaalaha iyo xoojinta isku socodka xaduudaha maadaama ay wadaagaan xaduud dheer oo isku xirta Hargeysa iyo Magaalada Jigjiga.
madaxweynaha dalwad-deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) ayaa uga mahad celiyay Madaxweynaha Somaliland sida loogu soo dhaweeyay Hargeysa, wuxuuna balan qaaday inay xoojin doonaan xiriirka labada dhinac iyo wadashaqeynta ka dhaxeeysa.
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa sheegay in Somaliland ay xiriir wanaagsan la leedahay dowladda Federaalka Itoobiya oo uu ka tirsan yahay Maamulka dowlad degaanka, ayna ka wada Shaqeyn doonaan arrimaha Amniga xaduudaha.
Madaxweynaha Dowlad degaanka Soomaalida Mustafa Muxumed Cagjar ayaa la filayaa inta uu ku sugan yahay Magaalada Hargeysa in uu la kulmo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Somalilane.
Previous articleAskari ka tirsan ciidamada dowladda oo weeraray axmaqnimo ah ku qaaday dad shacab ah
Next articleSix Sudanese soldiers killed in Ethiopian attack
Xog: Guddiga doorashada ay si weyn u danaynayeen helidda baasboorka diplomatic...
Ilo xog-ogaal ah ayaa ii sheegay in guddiga doorashada ay si weyn u danaynayeen helidda baasboorka diplomatic ah. Baasaboorka diplomatic ah waxaa caadi ahaan waxaa...